Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahadisoan-dàlana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahadisoan-dàlana
Fitiavan-tanindrazana samy manana avokoa. Ny fitandroana ny tsy hisehoan’ny ratsy no tsy ananan’ny maro. Faly izy, faly dia faly ka hendratrendra toy izay raha nahita ny vokatry ny fifidianana. Vokatra nandrandraina nefa tsy nampoizina toy izany. Io hafalina tsy nampoizina io angamba no naniraka an’Andriamatoa Marc Ravalomanana hanao fiantsona maimaika vahoaka ahafahany misaotra an’izay nametraka fitokisana taminy teo am-pandatsahana ny vato safidiny.
Toa hadino tamin’izany fahamaimaizana izany anefa fa tsy mbola valim-pifidianana vonjy maika akory ny tarehimarika mivoaka etsy sy eroa. Adino koa angamba fa saropady ny fanetsiketsehana vahoaka toy izany mialoha ny fotoana mety. Indrindra indrindra moa fa ho azy izay efa nitarika hetsika niteraka savorovoro sy korontana tamin’ny taona 2002. Korontana izay mbola itaizana fery miafina hatramin’izao. Tsara ny fahaizana misaotra, nefa toy ny zava-drehetra misy ny fotoana mendrika hanaovana izany. Mainka moa fa raha arak’izay vokatra farany dia hisy ny fihodinana faharoa.
Na avy amin’ny ankilany na avy amin’ny andaniny dia tsy azo ekena ny fanehoana ankalamanjana vokatra manambara fa indray miodina dia ravany ny tsena noho ny fandreseny tamin’ ny fahazoana atsasa-manila ny isan’ny vato manan-kery. Efa tranga niseho moa ka rariny ny fiampangana an’izany ho fikasana famerenana ny fanaovana amboletra. Nandaitra moa izany tamin’ny androny, azo heverina anefa noho ny sedra maro nodiavina taty aoriana dia tokony ho tonga saina fa efa navadika ny pejy. Tsy toy ny omaly intsony ny androany.
Marina fa tsy Ravalo sy ireo mpanohana azy no azo ampangaina ho nanao an’ireo fomba nanatanterahana fanodikondinana ny safidim-bahoaka araky ny fitarainan’ny tarik’ingahy Rajaonarimampianina. Tsy manana olona manana fahefana hanao izany izy. Mety hisy marina ny filazan’ny HVM, nefa na vonjy maika fotsiny aza ny maha Filohampirenena an’i Rivo Rakotovao, fantatra avy aiza no nahatongavany tamin’izany toerana izany?
Mandrora mitsilany Ingahy Hery Rajaonarimapianina raha mitady hanilika any amin’ny hosoka sy karazany ny fisehon’ny vokatra mahamenatra hany voahangony. Ny mpanolo-tsaina sady mpanosotra savoka hanalamana ny gorodona mampiseho fahaizana hatrany hanampina ny masony ka lasa mampirona an’ingahy rainy hiteniteny foana. Ny fahendrena sy fahaizana miala dia angamba tokony ho naniraka azy hanambara ny faneken’ny voka-pifidianana na mipetraka aza ny ahiahy momba ny fanomanana sy fitantanana ny fomba nanatanterahana azy.